my kitchen my life: kitchen စကားလုံးများ စု ခြင်း ( B )
kitchen စကားလုံးများ စု ခြင်း ( B )
1. Baguette – French bread ။
2. Bain-marie - ဘိမ်မာရီ - အစားအစာများကိုး အေးမသွားအောင် အပူချိန်ထိမ်းထားနိုင်အောင် ရေပူများထည့်ထားသော မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတမျိုး။
3. Balsam - သစ်ဆီမွှေး။
4. Balsamic vinegar - ဘလက်စမစ် ဘနီဂါ -
5. Bamboo shoot - မျှစ်စို့။
6. Banana - ငှက်ပျောသီး။
7. Barbecue - ဘာဘီကူး။
8. Barley - ဘာလီ။
9. Basil - ဘေဇယ်- ပင်စိမ်းပင်။
10. Bay leaf - ကရဝေးရွက်။
11. Bean curt - ပဲပြား။
12. Bean sprout - ပဲပင်ပေါက်။
13. Béarnaise sauce - ဘာနိုက်စ် ဆောစ့် It isavariation of hollandaise sauce. White wine or vinegar, diced shallots, tarragon, and peppercorns are cooked together and reduced and sieved and then added to hollandaise sauce. The spice tarragon is what gives itadistinctive taste. The sauce is served with beef and some shellfish
14. Béchamel sauce - ဘချက်မယ် ဆောစ့် - It is also know as "white sauce." It isasmooth, white sauce made fromaroux made with flour, boiled milk, and butter. It is usually served with white meats, eggs, and vegetables. It forms the basis of many other sauces.
15. Beef stroganoff - ဘိဖ် စတွော့ဂနော့ - အမဲသားကို ခပ်သေးသေးရှည်ရှည် လှီးပြီး browon sauce ကြက်သွန်နီ ၊ ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော မှို တို့နှင့်ရောကာ ချက်ထားသော ဟင်းပွဲ။ A dish that consists of thin slices of tender beef (usually tenderloin or top loin), onions, and sliced mushrooms. The ingredients are quickly sautéed in butter and combined withasour-cream sauce. It is usually accompanied by rice pilaf.
16. Bell pepper – Capsicum. ငရုတ်ပွ တစ် မျိုး။
17. Bisque – seafood soup.ပြင်သစ်စကားလုံးဖြစ်သည်။
18. Bitter gourd - ကြက်ဟင်းခါးသီး။
19. Blanch / blanching - ရေနွေးပူထဲတွင် ခဏတာမျှ နှစ်ပြီး ပြန်ဆယ်သော ပြုတ်နည်းတမျိုး။
20. Blend - ရောသမအောင် စက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ လက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း မွှေသည်။
21. Blender – အစားအစာများကို ရောမွှေ ၊ ကြေညက်စေရန် အသုံးပြုရသော စက်ပစ္စည်းတမျိုး။
22. Bleu cheese – blue cheese
23. Boil - ပြုတ်ခြင်း။
24. Bottarga –ဘိုတာဂ- raw fish egg ၊ ငါးဥ။အီတလီစကားဖြစ်သည်။
25. Braise –Braising is basicallyaslow-cooking method for tough cuts of meat or poultry and even stringy vegetables. They are cooked slowly inasmall amount of liquid inacovered pan. Stews and pot roasts are among the dishes prepared this way. Braising may be done inacovered container in the oven, on the range, or inacovered steam kettle or fry pan. In all the moist-heats methods of cooking, the moisture or liquid not only conducts heat toaproduct, but it interacts with the food being cooked and can influence the final taste and texture ofaproduct.
26. Bread - ပေါင်မုန့်။
27. Brinjal – ဘရင်ဂျယ် - ခရမ်းသီး။
28. Broccoli - အစိမ်းရောင်ရှိသော ပန်းမုန်လာ။
29. Brochette – satay စာတေး တမျိုးဖြစ်သည်။ အသားတုံးသေးသေးလေးများကို တံစို့တွင်ထိုးထားပြီးကင်သောထားသော အစားအစာဖြစ်သည်။Small portions of meat, chicken liver, or seafood that is cooked onaskewer (usually sautéed or grilled). Food cooked "en brochette" is cooked onaskewer. Also known as kabob,ala broche, or shish ka bob. It is derived from the word "broche," meaning, "pointed tool”.
30. Broth - အသား ၊ ငါး ၊ အသီးအရွက်များကို မီးအေးအေး ဖြင့်ပြုတ်ထားသော အရည်။
31. Brunoise – ဘရူးနွိုင်းဇ် - ပြင်သစ်စကားဖြစ်သည်။ အသီးအရွက်လှီးဖြတ်နည်း တမျိုးနာမည်ဖြစ်သည်။It isaFrench word used to describeamixture of vegetables, usually onion, celery, and carrot, which has been very finely diced, then cooked slowly in butter. This classic mixture is used asabase to flavor soups, stews and sauces.
32. Bruschetta - ဘရူချက်တာ - အီတလီ စကားဖြစ်သည်။ French bread ကို ခပ်စောင်းစောင်းလှီးပြီး ထောပက်နှင့်  ကြက်သွန် ၊ လိမ်းကာ ဖုတ်ထားသော ပေါင်မုန့်တမျိုး။Traditional Italian garlic bread. Grilled slices of bread are brushed with extra-virgin olive oil and fresh garlic.
33. Brussel sprouts / curly olive - မုန်လာထုပ်ငယ်၊ အလိမ်မုန်လာခါး။
34. Butter - ထောပက်။
Posted by leo mark at 11:28 PM